IFirefox OS 1.1: ngokuningiliziwe nangesikhathi esizayo | Kusuka kuLinux
I-AurosZx | | Okunye
Njengoba wazi, cishe inyanga engu-1 edlule Uhlobo lwe-Firefox OS 1.1, kuphela amafoni wonjiniyela.
Ngemuva kwesonto, wakhululwa I-ZTE Vula futhi i Alcatel OT Umlilo kwamanye amazwe. Ngasizathu simbe, eVenezuela asikaze siyithole ngesonto eledlule (kuqondane ukuthi besikhala izinsuku ezimbili kuTwitter), bese ngiyifaka ngokushesha kufayela lami le- Alcatel OT Umlilo (labo abafundayo ukubuyekeza kwami, bayazi ukuthi akuyona eyami ngokuphelele hehe).
Namuhla ngiza ukuzokhuluma ngokuningiliziwe ngokuthuthuka kwale nguqulo 🙂
Kakade phambilini uzakwethu izinga nos okukhulunyiwe ukuthuthuka okumenyezelwe ngabafana eMozilla, kepha kimi kubonakala sengathi akukho ukuqhathaniswa nenguqulo yangaphambilini okwenziwe, ngakho-ke sizokhuluma ngalokho namuhla.
Ngiyakukhumbuza ukuthi ukuqhathanisa kususelwa ekuhlolweni nge Alcatel OT Umlilo, umphumela ungahluka ngokuya ngedivayisi. Kuhle futhi ukusho ukuthi lokhu ukwazisa komuntu siqu, futhi engikushoyo kungahle kube noma kungalungile.
1 Yini eshintshile?
2 Iziprofetho neziphetho
Ukuze ube isibuyekezo esincane (cishe ngama-30-40MB, ngithatha kuphela uGaia, ingxenye encane yeGonk kanye nokuhlubuka kweGecko kuvuselelwe), uma ibonisa ushintsho olukhulu oluqhathaniswa nolwedlule. Nazi izinguquko eziye zibonakale kimi nsuku zonke.
Ucabangani ngezinguquko zokubukeka? Ngibathanda kakhulu. Isitayela esisha semodi yokwenza imisebenzi eminingi (ukushintsha izinhlelo) Ngikuthola kungokoqobo ngokwengeziwe, kanye nesitayela esisha esincane semigoqo yokusesha (Ngingathi zibukeka zifana ne- «Australis»).
Ngabona nokuthi bangezile ukugqwayiza okuningi ezinhlelweni zokusebenza, ezenza zibe mnandi kakhulu. Futhi ngiyaluthanda ushintsho oluncane kuhlelo lokusebenza lwemeyili. Nginokungabaza kwami ​​mayelana nebha yokusesha kudeskithophu enkulu, kepha sizobona ukuthi lokhu kuholelaphi.
Ngibonile eminye imininingwane emincane kakhulu, njengokuthi manje i-a umsindo omfishane ngokucindezela inkinobho Ikhaya. Angazi ukuthi kungakhuphula ukusetshenziswa kwebhethri, kepha ngithanda ukuyikhubaza (hhayi into ezwakala kalula vele).
Balungisa i-glitch encane ebonakalayo kwikhibhodi, kepha eyodwa yavela kuhlelo lokusebenza lwemeyili futhi ngikuthola kuyacasula. Susa inkinobho Ukuxhumeka kwe-USB ekhasini eliyinhloko lemenyu yezilungiselelo ushintsho oluhle, ompompi abambalwa.
Noma, inketho iseku-submenu efanayo njengakuqala, angiqondi ukuthi kungani.
Futhi ucabangani ngezici ezintsha? Zazidingeka 🙂 Ukulungiswa okuzenzakalelayo kukhibhodi kuhle impela, yize kungavumeli umsebenzisi ukuthi achaze amagama angeziwe.
Ngithanda okusha Umphathi wezicelo, icishe ifane nemenyu ye- Android, futhi yinto engizokhuluma ngayo esigabeni sokusebenza ngokujulile.
Amandla okuthumela MMS Anginandaba, kuyinto engingakaze ngiyisebenzise (yize kukuhle), kepha ngiyabonga kakhulu ngokukwazi ukukhetha ngaphezu komamukeli oyedwa ukuthumela imilayezo (Umama wami ngeke aphile ngaphandle kwalokhu, kuncane kukhisimusi nangosuku olwandulela unyaka omusha).
Ukwazi ukwengeza oxhumana nabo kusuka ku- Ikhadi le-SD / GMail ne-Outlook, ayigugu.
Kukhona nemininingwane engalindelekile: isidlali somculo / sevidiyo sakhiwe kabusha (uma kwenzeka sisekhasini lewebhu).
Ngisho, manje umdlali I-HTML5 inamandla amakhulu. Singathulisa umsindo ngaphandle kokwehlisa ivolumu, noma sibuke amavidiyo ancishisiwe emakhasini afana nalawa YouTube (phambilini bekungenzeka kuphela kusikrini esigcwele). FUTHI… * idrama *… Singakwazi landa umsindo / ividiyo kusuka kumakhasi!
Vele, lezo ezilandela isakhiwo esiyisisekelo: http://www.página.dominio/ruta/al/archivo.extensión. Kufanele sikwazi ukulanda noma iyiphi ifomethi engadlalwa ngohlelo (WAV, MP3, MP4, njll) ngokubamba phansi imizuzwana embalwa lapho ubuka ividiyo / ulalele umsindo.
Ngabe kukhona ukuthuthuka kokusebenza? Ingabe kuyamanzi kakhulu? Yebo, okuningi noma okuncane, futhi cha. Masithi lesi sigaba kufanele sithathwe ngokunakekelwa nemininingwane eminingi kunaleso esedlule. Ake sikhulume ngokusebenza nokusetshenziswa.
Noma kunjalo ukusetshenziswa kubonakala kufana (noma kunoma yikuphi okuncane), uma ubona ukuthuthuka okuhle kokusebenza. Ubumanzi besistimu, njengezithombe ezigqwayizayo, buhamba ngamasethingi nakho konke okukhulu.
Ukube bekufanele ngibeke inombolo kuyo, bengizothi uketshezi olungu-10% ngaphezulu lapho ngihamba ezikrinini, kuze kufike ku-30% ngokushesha lapho ngivula izinhlelo zokusebenza (lokhu kuhlolwe kusuka kunketho ye- "Show time loading" esigabeni sonjiniyela).
Ukube ubukade uqaphele ukungekho ohlelweni lapho ulayisha amakhasi, ulalela umculo, phakathi kwezinye izinto ... Ake ngikutshele ukuthi ngabe ayisekho, noma ivela ezimweni ezithile.
Ngiyachaza. Ngikwazile ukuhamba kahle, noma ngidlale / ngithumele imiyalezo ngenkathi ngilalele umculo, ngaphandle kwezinkinga. Eqinisweni, ukusetshenziswa kwe- I-YouTube neGrooveshark ziyahamba kahle, ngaphandle kokuthi uma sibuka ividiyo futhi sibuyekeza amazwana ngasikhathi sinye. Futhi lapho ngiqonde ukudlala, ngikhuluma ngakho Sika Insimbi, ngasendleleni, manje esebenza ngaphandle kwezinkinga.
Mayelana nokusetshenziswa: esimweni se CPU Kufanele kucishe kufane, ngoba namanje akukho ukusekelwa kwe- I-WebGL, ngakho-ke, i- GPU yocingo (ku-ZTE Open and Alcatel OT Fire, yi-Adreno 200 Enhanced, solvent kuphela). "Cishe kufana" kusho "cishe kuya phezulu" isikhathi esiningi.
Endabeni Ukusetshenziswa kwe-RAM, ihlala njengakwinguqulo yangaphambilini. Ngiyakwazi lokhu ngoba ngenze isivivinyo ngokuqala kabusha idivayisi futhi ngayixhuma nge-USB ukusebenzisa i- I-ADB (ngokufana nokuhlaziywa kwami ​​kwangaphambilini).
Of 256MB RAM, 70MB kubekelwe uhlelo, 180MB iyasetshenziswa, ishiya umsebenzisi ezimbalwa 40MB. Ukusetshenziswa kwememori kwangaphakathi kwezinhlelo zokusebenza akubonakali kukhuphukile.
Ngithatha leli thuba ukukhumbula ukuthi yize I-Kernel de I-Firefox OS kusekelwe kulokho kwe Android, UDalvik VM ukuze Java, ukuze kugcine ukusetshenziswa kwe-RAM kuphansi.
Ngishilo ukuthi manje bekukhona ifayela le- "Umphathi wohlelo" kumenyu Izilungiselelo. Ukusuka lapho singakwazi misa, khipha noma sula idatha / isilondolozi sohlelo lokusebenza, noma ngabe uhlelo noma umsebenzisi (Impela ama-system awakwazi ukukhishwa).
Ngidlale ngesibindi futhi ngazama ukumisa isikrini se-boot noma uhlelo, kepha akwenzekanga lutho oluyisimanga (Ngiyazi, uma bethi uyafa ukugxuma usuka ophahleni lwendlu, ungene lapho ukubona ukuthi kubuhlungu yini ...).
Izinketho zemvume yohlelo lokusebenza ngalunye nazo ziyavela, ngakho-ke ngicabanga ukuthi zombili izingxenye zemenyu zizohlanganiswa maduze.
Leyo menenja ingaba wusizo uma ngabe olunye uhlelo lokusebenza luziphatha ngendlela exakile, noma mhlawumbe sifuna ukumisa ngokuphelele (lezo ezinezinqubo zangemuva).
Cha, angizile ukuzokutshela ukuthi umhlaba uzophela ngoFebhuwari 31, 2020. Kepha ngibonile ezinye izinto zijikeleza enetheni futhi kungakuhle ukuzisho lapha. Izinto ezenziwayo ngokukhishwa okuzayo, ukuqagela okuningi, nohlu lwezifiso.
Ukufika kweWhatsApp. Impikiswano cha, okulandelayo. Bathe cha, khona-ke othile wasakaza amahemuhemu okuthi yebo, bese kuphinde kwaliwa. Kepha angiboni ukuthi kungani kungenjalo. Vele, izivumelwano ezisetshenziswe yi- Whatsapp bangadalulwa futhi impi yama-clone ingaqala. Okwamanje, singasebenzisa XhumaA2, etholakala kuwo wonke umuntu ku- Marketplace.
Umenzi. USomandla futhi oseduze. Kuyacaca ukuthi izofika. Ukube bekufanele ngiqagele ukuthi nini, ngicabanga ukuhambisana ne- IFirefox OS 1.2+ y I-Firefox 26+Ngingathi ekuqaleni konyaka olandelayo. Kuyabonakala ukuthi kuzoba ithuluzi elibaluleke kakhulu konjiniyela bezinhlelo, futhi nokufeza uhlelo oluzinzile nolunobungane.
Ukuqashelwa kwenkulumo nokuhlanganiswa kwenkulumo. Ngikhumbula ngithola ividiyo ngalokhu ku Twitter. Kwakuyidivayisi yokuhlola ene- I-Firefox OS usebenzisa Ukuqashelwa kwenkulumo okusekelwe kwi-WebRTC: SpeechRTC. Isekela izilimi ezi-4: isiNgisi, iSpanishi, isiShayina nesiPutukezi. Sekukonke, bekubonakala kusebenza kahle, futhi kungenzeka sikuthole kungekudala I-Firefox OS futhi ku IFirefox yedeskithophu. Uyayibona lapha.
UDaala, i-codec entsha yevidiyo. Lokhu uma kufanele uyifunde, i-codec esebenza kahle futhi evulekile yomthombo wevidiyo. Bengingeke ngikukhiphe ngaphandle ukuthi bekuyikho isekelwa kuFirefox OS ngaphakathi kwezinguqulo ezimbalwa, uma kufanelekile ngaleso sikhathi.
Ukusekelwa komngcele. Esigungwini seMoz 2013, izivivinyo zenziwa nge Izilawuli ze-PlayStation 2, i-Leap Motion, ama-LED nezinye izinto kuFirefox OS. Akuyona into ebaluleke kakhulu, kepha kuhle ukwazi ukuthi kuyasetshenzwa.
Ukusekelwa kwamakhibhodi ahlanganisiwe nange-Bluetooth. Ngokuzenzakalela ngazithela ku I-Dev ku-Twitter okwakukhona ithumela i-Firefox OS ku-HTC Desire Z, ngathola ikhibhodi isebenza ngamachashazi ambalwa. Ezinsukwini kamuva, boom, layisha isithombe sokusekela sokuhlola se- Amakhibhodi we-Bluetooth. Ngabe sizobona amadivayisi amasha ngekhibhodi ye-QWERTY? Ngiyethemba kanjalo.
Ukusekelwa kwama-GPU nezinye izinqumo. Ngenhloso kaMozilla yokufeza lokho I-FxOS finyelela kumadivayisi amaningi, kungenzeka ukuthi kusekelwe ama-GPU anamandla nosayizi / izinqumo zesikrini eziningi. Ngiyavuma, kepha ngaphandle kokuzeqisa noma sizogcina ngama-phablets amsulwa.
Isitayela esisha semisebenzi eminingi. Ngikubona kungeke kwenzeke, kepha lolu uhlobo lwento umuntu athanda ukuyibona. Njengoba isenzo "sokuswayipha kusuka emaphethelweni" singasetshenziswanga ku- I-Firefox OSKungani ungayisebenzisi ukushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza? Kumele ukuthi bacabanga lapha.
Uma bekufanele ngiqagele, bengingasho ukuthi kulezo ziprofetho eziseduze kakhulu yilezi: Ukusekelwa kwe-GPU (abafana baseMozilla bakhulume ngodaba futhi lubaluleke kakhulu), Umenzi (Siyazi ukuthi luzofika, kusazobonakala ukuthi ngiluthole kahle yini usuku), Whatsapp (bathi cha, kepha uma abakhiqizi abaningi belinga, nabo banesiqiniseko), futhi amadivayisi wekhibhodi (low end + keyboard = ukuthengisa okuhle, hhayi wonke umuntu usetshenziselwa ukuthinta izikrini).
Uma unokuthile ongakufaka, ungakushiya lapha kumazwana 🙂 Futhi, ngitshele ukuthi yini enye ongathanda ukuyibona IFirefox OS lapha kuLinuxAke sibone ukuthi ngiyasifeza yini isifiso sakho 😉 Sanibonani.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » IFirefox OS 1.1: ngokuningiliziwe nangesikhathi esizayo
Bengingafuni ukwenza isibuyekezo ngqo ngoba ngifuna ukubuyekeza i-ZTE Open yami kuqala. Kuyiqiniso ukuthi njengoba kunjalo, isebenza kahle kakhulu, kepha wonke umuntu ungitshela into efanayo, ukuthi ngohlobo 1.1 no-1.2 lweFirefoxOS, izinto ziba ngcono kakhulu.
Kufanele futhi ngifunde ukusebenza ne-ADB ku-Arch yami .. Ungangifundisa? 😀
Uma unenguqulo 1.0 ye-ZTE, ungathuthukela ku-1.1 usebenzisa igatsha lasebusuku, okungenani kusuka ku-1.0 kuye ku-1.1 noma ku-1.1.1. Ukusuka ku-1.2 kuye phezulu, izinto eziningi ezengeziwe ziyashintsha futhi kungenzeka ukuthi okuthile kuzogcina kungahambi kahle lapho kuvuselelwa ngaleyo ndlela ¿^^
Inzuzo ukuthi ibonakala njengesibuyekezo esisodwa sohlelo futhi idatha yomuntu siqu ayilahlekile njengoba kungenzeka uma kukhanya inguqulo ehlanganiswe nguwe.
Inkomba ehambisanayo ukufaka ifayili lokumisa efonini
i-adb shell mkdir -p / system / b2g / defaults / pref /
Sakha ifayela le-updates.js esizolisebenzisa, likhomba enguqulweni engu-1.1
i-echo 'pref ("app.update.channel", "ebusuku");' > izibuyekezo
i-echo 'pref ("app.update.url.override", "http://update.boot2gecko.org/inari/1.1.0/%CHANNEL%/update.xml?build_id=%BUILD_ID%&version=%VERSION%" ); ' >> izibuyekezo.js
Futhi uma sesidaliwe sayibeka endaweni yayo
i-adb push updates.js /system/b2g/defaults/pref/updates.js
Kuhlala ukuqala kabusha ifoni, linda ukuthi isaziso sokuvuselela sivele, silande futhi sisebenzise
PS Impela, ngaso sonke isikhathi yiba nenguqulo esemthethweni esesandleni ekhadini le-SD uma kungenzeka ^ ^
Okokuqala iShiba87, ngiyabonga ngokuma .. Ngicabanga ukuthi kuqala kuzofanele ngikwenze lokho:
Ngoba njengamanje, lapho ngizama ukubuyekeza, kunginikeza iphutha noma kungitshela ukuthi akukho lutho. 🙂
Umqondo kungaba ukudala ifayela le-update.js ngaphakathi / system / b2g / defaults / pref / okukhomba ku-B1.1G version 2. Yini ebikade ingeze "indawo yokugcina" entsha, kuphela nge-ADB nge ¿^^
Ngokwakha indlela nokubeka i-update.js lapho ngesiteshi esifanele sokuvuselela ifoni kufanele iqale ukukhombisa izibuyekezo ezintsha.
Ungayibona ku- «Izilungiselelo >> imininingwane yedivayisi >> imininingwane eminingi >> buyekeza isiteshi»
Njengamanje lapho ngeke ube nalutho noma kuzobeka "okuzenzakalelayo", lapho nje ungeza ifayela le-update.js kufanele liguqulele ku- "Nightly"
Leyo yinto exakile, ukuthi njengamanje iyangitshela ukuthi isebenzisa iNightly kodwa ayenzi lutho. Kuzofanele ngibeke ifayili ngesandla ngibone ukuthi kwenzekani. 🙂
Ulwazi oluhle kakhulu, ngiyabonga 🙂 Ngaleyo ndlela ungaba seRolling Release ngempela.
Futhi i-elav, kunjalo, ngolunye lwalezizinsuku ngizokufundisa 🙂 Uma ujwayela i-ADB, uncamela ukudlulisa amafayela ozosebenzisa ngawo ukwenza i-USB xD
Futhi ingabe lokhu kweFirefoxOS kuvumela noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukuthi luziqalele noma kunini lapho bafuna khona futhi ngaphandle kokukwazi ukukuguqula kusuka ku-OS uqobo? Ngamanye amagama: Ingabe uhlelo olusebenzayo kanjalo noma luyisitayela se-Android sokuthi ukuvala i-WhatsApp kufanele usiphule ifoni, wenze i-200-caliber botch bese ukhokha ukufaka uhlelo lokusebenza olukuvumelayo?
Angikaze ngikuhlole kahle lokho, kepha angicabangi ukuthi. I-API Yangemuva ivumela umsindo, ividiyo nezinye izinqubo zangemuva ukuthi zisebenze, kepha angazi ukuthi izisebenzisa ngokuzenzakalela ekuqaleni kohlelo. Futhi angazi noma ngabe lezi zinqubo ziyeka ngokuphelele kuMphathi Wokufaka, ngoba angicabangi ukuthi lukhona uhlelo lokusebenza lokuluhlola.
Ngendlela i-AurosZx, ungabona ngayo izindaba eziza nohlobo 1.2 lapha: http://gnulinuxvagos.es/topic/2151-cr%C3%B3nicas-de-un-ping%C3%BCino-con-firefox-os-3%C2%AA-parte-v12/
Kubukeka kuthakazelisa, ngiyakulangazelela 😛
URoberto Simancas kusho
I-athikili enhle nokubuyekezwa okuhle, into eyodwa ebengingazi ukuthi abayisebenzisanga i-gpu, ngabe lokhu kusho ukuthi lapho beyisebenzisa, ukusebenza kuzoba ngcono kakhulu? kahle uma kuzoba ukuthi nje kuyangimangaza lokhu, ngemuva kokuvuselelwa uma ngithuthukisa ukusebenza engikucabangayo lapho i-gpu isebenza wow.
Nakulokhu isihloko esihle kakhulu, imikhonzo
Phendula uRoberto Simancas
Isibikezelo esihle kakhulu seFirefox OS. Ngokuqondene neWhatsApp, angiyisebenzisi (ngiyizamile futhi yabonakala ingekho emthethweni).
Siyakuhalalisela ngokusebenza. Ngiyethemba ukuthi i-Firefox OS yamaselula afana neyami (i-Samsung Glaxy Mini) ingashintshwa, nokuthi ukubekezela kwami ​​akuphuli nobudala obuhlelwe.
Ngiyabonga. Eh, ngikhulume ngakho kaningana, akukwazanga ukuguqula i-FxOS iye kuma-processor we-ARMv6 (ngokusemthethweni) ngoba akuyona into ebaluleke kakhulu. Ngokobuchwepheshe kungenzeka, kepha akukenziwa (ngaphandle kweGeeksphone Zero, ehluke kakhulu).
Ngiyathanda ukubuka amavidiyo we-HTML5 (iVimeo iyamangalisa futhi ingumpetha emkhakheni wayo), ukuba kuVK, Facebook, Diaspora, Twitter nakwamanye amanethiwekhi omphakathi.
Ngokuqondene ne-ARM v6, impela abafana be-XDA Developers bayayinakekela leyo misebenzi.
Yeka ukubuyekeza okuhle, ngiyakuhalalisela !!! AurosZx !!! Manje into engingathanda ukuyibona kuqala yividiyo yokuthi isebenza kanjani futhi uma wenza izivivinyo nge-adb, kungakuhle ukubona ukuthi iFirefoxOS isebenza kanjani kumakhompiyutha aphansi, manje ku-whatsapp iNobel engikholelwa kuye manje !!! hahaha ngicabanga ukuthi isicelo somakhalekhukhwini, ikakhulukazi nabantu abanjengami abanomndeni wonke ngaphandle kwezwe futhi sinethuba lokwenza iqembu futhi sihlanganyele nawo wonke umuntu oseqenjini, ukuthi abafana njengenjwayelo umsebenzi omuhle ngiyabahalalisela wena !! U-Ariki
Ngingabhala inqubo nge-ADB, kepha anginayo ikhamera enhle yokuqopha ividiyo yokusebenza kwefoni record
nangenye i-smartphone? jejej wenza kahle ngaleyo imikhonzo yesikrini!
Kuhle kakhulu ukuhlaziywa kwakho, ngine-alcatel eyodwa touch fire, ngiyithenge ngo-Agasti 1 walo nyaka, ngalo lolo suku ekhishwe ngayo eVenezuela. futhi uma kwenzeka lokho ngithuthuke kakhulu ngokuvuselelwa kwe-firmware ye-39 mb. Engikukhumbulayo nengikufunayo ukuthuthukisa uhlelo olufunda i-pdf ngoba nginencwadi ye-pdf kwimemori futhi angikwazi ukuyifunda ngoba akekho owenze i-pdf reader ye-firefox ngaphandle kwe-adobe esobala. ngiyabonga futhi kimi kuyintokozo ukuba kusukela ekuqaleni kwale OS enkulu.
Kubukeka sengathi ngifunde eMozilla Hispano ukuthi uma ubhala ikheli le-PDF kubha yesiphequluli, lokhu (njengakwideskithophu) kukuvumela ukuthi ulifunde 😛 Kufanele uzame.
Ngiyethemba ukuthi izibuyekezo ezilandelayo ziyaqhubeka nokufika zalawa madivayisi amabili ayisisekelo futhi ungazilahli ngokushesha ngokungabikho kwehadiwe eningi njengoba kwenziwa kwezinye izinhlelo. I-Firefox OS Kungaba enye indlela enhle kulabo abasebenzisa amadivayisi wokugcina aphansi kepha futhi nendawo ephakathi nendawo ephezulu ngokuzayo-
Ngokushesha ... umakhalekhukhwini omusha xD
Ngingathanda ukwazi ukuthi ingafakwa yini kwi-Samsung Captivate, ukuthi imodeli enginayo, ingabe lezi zivivinyo zenziwa ocingweni olune-cpu noma i-dual core? Ngicabanga ukuthi i-firefox kufanele ithuthukise i-kernel yayo, uma i-linux ine-kernel yayo ngoba i-firefox ayizange ikhiqize i-kernel yayo? Ngiyithanda kakhulu le OS ngoba inamazinga aphephile, iJava isibe ulimi olunembobo enkulu kakhulu yezokuphepha kulokho engikuthole funda.
I-ZTE Open ne-Alcatel OT Fire inenhliziyo eyodwa kuphela ngokwazi kwami. Kungani bengathuthukisi i-kernel yabo? Anginalwazi. Mhlawumbe hhayi ukuphinda uvuselele isondo, ngoba i-Android Kernel isivele yenziwe kahle ngicabanga ukuthi kumadivayisi eselula.
Ngendlela, bheka lesi sixhumanisi, kungahle kube nentshisekelo: http://mundofirefoxos.blogspot.com/2013/11/catalogo-de-smartphone-con-firefox-os.html
Well is mononucleated, and I don't think they have to develop their kernel (not from scratch, maybe fork it). Ngenxa yezici ze-Captivate (nokuhambisana kwayo ne-CM9, i-Android 4.0+, enhle impela), mhlawumbe kungenzeka ukuthi kwenziwe ichweba. Isinyathelo esiyinkimbinkimbi kunazo zonke kungaba ukwakha "umuthi wedivayisi", engingakwazanga ukuwudlulisa ku-Optimus One.
Kuyathakazelisa! Ngiyabonga ngale ndatshana. Angisakwazi ukulinda ukubamba ifoni ngeFirefox OS. 🙂
Bengicabanga ukuthenga ikhompyutha ezweni lami (Kubiza ama-peso ayizinkulungwane ezingama-50 kuphela !!! cishe sebeyayidlulisela)… kepha iseli lami okwamanje lisebenza kahle futhi angisiboni isidingo sokushintsha iseli. Kepha ngithole nje umbuzo: Ngabe iFirefoxOS iyasebenza kumathebulethi? Uma kunjalo, ngizoyithenga ngokushesha (ngithole imali).
Siyabonga ngolwazi nokulangazelela okuningi kweFirefoxOS 🙂
Angazi ukuthi kuzoba khona yini vele emakethe, kepha yebo. Kunamathebulethi amaningana amenyezelwe azothengiswa ngeFirefox OS
I-WhatsApp ayibonakali iyinkinga enkulu. Uhlelo lokusebenza lwamahhala loqui luzolusebenzisa nalo !!
I-Brayan contreras kusho
Kuhle kakhulu kepha ifike sekwedlule isikhathi umakhalekhukhwini wami untshontshiwe ngaphambi kokuthi ngizame isibuyekezo 🙁
Phendula uBrayan Contreras
I-GPU GPU GPU GPU !!
Ngifuna iFirefox ifinyelele e-Ecuador
Sawubona, ngingathanda ukuthi ufake i-bbm kubuchwepheshe be-firefox.
Kuthiwani uma sisebenzisa i-Intanethi ukuthuthukisa intando yeningi?